Minnesota xaalkeedu meel xun ayuu marayaa – LaacibOnline
Mas’uuliyiinta gobolka ayaa ka walwalsanaa in kulamadii dadka ee dhacay dhamaadkii xagaaga iyo horaanta dayrta, dhacdooyinka isboortiga iyo isu imaatanka bulshada aan rasmiga ahayn in ay keennaan kor u kaca cudurka faafa bisha Oktoobar maaddaama reer Minnesota ay sahal sadeen iska ilaalinta fayraska. Taasi way dhacday, bisha Noofeembarna fara ba’an ayay ku haysaa.
“Minnesota waxay kujirtaa waqti xun … wayna kasii dari doontaa ka hor intaysan fiicnaan,” Ehresmann ayaa usheegtay wariyayaasha Isniintii. Waxayna ka codsatay reer Minnesota inay ku labistaan gafuur-xer marka ay joogaan meelaha bulshada ku kulunto, kala fogaadaan iyo in ay ku dadaalaan siday u joojin lahaayeen faafida cudurkan halista ah.
In kasta baaritaannada badan ee caafimaad kor u qaadaan tirada dadka buka, “ma aha baaritaannada caafimaad dhibaatada jirta,” ayay Ehresmann tiri. “Waase xaqiiqda dhabta ah ay tahay in fayras fara badan ku wareegayo gobolkeenna.”
← Minnesota Governor announces four-week ‘dial back’ to control spread of COVID-19
President Farmajo Mocks Opposition Leaders Who Protested Against Biased Electoral Committees →
Axad, Aug 16, 2020-Wararkii ugu dembeeyay weerarka hotel-ka Elite